֏ Armenian drams
Br Ruble reBelarusian
R $ Brazilian chaiyo
Kubva $ Canadian dollar
₴ Ukrainian chiukreni
SEK Korona dzeSweden
Kubviswa kubva kuSwitzerland
Kutengeswa kwezvinhu kubva kuSwitzerland
Basa Swiss Apteka rinopa maitirwo ekutenga uye kutengesa zvinhu kubva kuSwitzerland. Kutenga kunowanikwa mumashambamiti ehurumende, mabhizimisi uye zvakananga kubva kune vanogadzira. Kutumira kunogadzirwa ne mail yekuSwitzerland.
Iwe unogona kuva nechokwadi cheSwitzerland yemhando yezvinhu zvakapiwa.
1) Mahara kutumira kwemavhiki e2-3 (Swiss Post)
2) Kuburitswa kwekutakura kusvika kumaawa e48 chero kupi muEurope, kusvika kumaawa e72 chero kupi munyika (uko ndege inobhururuka). Pane zvinotemerwa tsika. Taura mutengo uye nzira dzekusvitsa dzakasarudzika.
Nhumbi dzinotumirwa kubva kuSwitzerland nekutakura uye makambani epositi. Munyika imwe neimwe pane mitemo yemitemo pamusoro pemari yakawanda yezvinhu zvakatumirwa, tapota tora izvi mubhuku iri.
Kuendeswa kuEurope. Kubhadharwa kwehutano kunoenderana nekukurumidza kwehutano uye kunoverengerwa mumwe nomumwe kune umwe neumwe mutengi.
Kutumira kuAsia: Chikamu chinobva kuSwitzerland chinogoneka kuHong Kong, kubva kwaunogona kutumira kuAsia nedzimwe makambani anotakura. Mukuwedzera, unogona kugamuchira chikamu chakaendeswa neSwitzerland Post kuhofisi yehofisi yehurumende maunogara.
Kutumira kuU.SA. Kuendeswa kwevhithamini uye kusingagadziriswa mishonga pasina zvibvumirano, pamishonga yemishonga, tsanangura zvakare.
Kuendeswa kuRussia. Mutengo wemirairo inofanirwa kusvika ku15.000 rubles muRussia inogadziriswa pakugamuchira. Mishonga inodhura kupfuura 15.000p. yakapiwa mubhadharo wakakwana. Mutsauko wekodzero unobatanidza nekuyambuka muganhu unotakurwa neMutengi, kana iyo purogiramu isati yamboisa tsika dzekwenyika yako, inodzoserwa kuSwitzerland. Mitengo yose iri panzvimbo ino yakatonyorwa nekutumira kuMoscow.
Iwe unogona kuraira chero chigadzirwa, chakakosha kusvika ku 1000 euros. Mishonga inodhura kupfuura ye1000 euros haisi kuendeswa kuRussia nekuda kwemiganhu yemitemo, kana inotarisirwa nemitemo yehutano muhuwandu hwe30% yehuwandu hwezvinhu.
Kuendeswa kune dzimwe nyika yenyika. Tsamba yekutumira mail.
Nekubatsirwa kwebasa reSwitzerland-Apteka, unogona kurayira mishonga, mavitamini, zvigadzirwa zvevana, zvigadzirwa zvevana uye zvimwe zvinhu mumashamba nemasitima kuSwitzerland uye kune dzimwe nyika dzenyika. Mukuwedzera kune yakarongwa yakatarwa, unogona kuraira chero zvimwe zvinhu zvakabatana zvine chokuita nekushandisa kwako zvisingagoni kutengwa munyika yako.
Kana usina kuwana chigadziro chaunoda, chingave chisiri mumabhuku edu zvakare, tumira chibatanisiro kubva kune imwe soro munyika uye tichaverenga kuendeswa kune kero yako.
Kana iwe uine mibvunzo yakawedzera kana uine kubvumirana, shandisa info@swiss-apteka.com
Heino mutsara weSwitzerland pharmacy range
Kutsigira kwe24 / 7
Kuti uronge chigadzirwa chaunoda iwe, unogona kushandisa fomu yesappimo
Kutengeswa kwezvikwereti kuRussia chete nokuda kwebasa rako pachako uye nemari inopfuura kudarika 1000 euro.
Iwe unotenga chete muzvivako zvepamusoro muSwitzerland.
Catalogue yeSwitzerland yezvigadzirwa zvehutano nekuendesa kunyika dzose dzepasi.
Kutenga zvinhu kubva kumativi ose enyika kuburikidza nekambani muGeneva
© 2011-2019. Kuendeswa kwezvinhu kuburikidza nemeseji kubva kumishonga muSwitzerland Swiss-Apteka.Com